Ampidiro izao Ho an'ny asa UNDP any Abuja ho an'ny mpanampy fandaharana 2021: Vaovao an-tsekoly amin'izao fotoana izao
Ampiharo izao Ho an'ny asa UNDP any Abuja 2021: Mitady asa any Nizeria 2021 ve ianao? Te hiasa ao amin'ny UNDP ve ianao? Ary koa, tsy hampaninona anao raha ampianarinay ianao amin'ny fomba ahafahanao mangataka ny fandraisana mpiasa UNDP any Nizeria sy ny sisa. Raha eny dia tohizo ny famakiana.
Programan'ny Fampandrosoana Firenena Mikambana (PNUD) manampy ny firenena an-dalam-pandrosoana hisarika sy hampiasa mahomby ny fanampiana. Amin'ireo hetsika rehetra ataonay dia amporisihinay ny fiarovana ny zon'olombelona, ​​ny fivelarana amin'ny fahaiza-manao ary ny fanomezana hery ny vehivavy.
UNDP dia mandray andraikitra hamenoana ny toerana etsy ambany:
Anaran'ny asa: Mpanampy amin'ny fandaharana - Fiaraha-miasa ao Nizeria amin'ny fanamafisana ny valin'ny fitsarana ady heloka bevava (eo ambanin'ny tetikasa manerantany "Fanamafisana ny fitondrana ara-dalàna hanoherana ny fampihorohoroana"): GLOR35
Joba ID: 4234
Location: Abuja, Nizeria
Faritra fampiharana - Fianakaviana miasa: Fananganana fandriam-pahalemana
Karazan-toerana: fifanarahana serivisy (SC)
Faharetan'ny fifanarahana: faharetan'ny taona iray
Ity toerana ity dia miorina amin'ny biraon'ny Firenena Mikambana misahana ny zava-mahadomelina sy ny heloka bevava (UNODC) any Abuja, Nizeria (CONIG).
Miara-miasa amin'ny ekipa miaraka amin'ny mpiasa mpanohana tetikasa hafa ao CONIG, ny tompon'andraikitra dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana fanohanana ara-asa, fandaminana, logistika ary fitantanana an'io tetikasa io.
Izany dia hahitana drafitra sy fanatanterahana ireo fepetra takiana amin'ny asa, logistika ary fitantanan-draharaha isan-karazany amin'ireo tetik'asa; mikarakara ny dia ataon'ny mpiasa, ny manampahaizana ary ny mpandray anjara amin'ny tetikasa; fanomanana tombana amin'ny vidiny sy fitazonana ny vinavina fandaniana; famokarana sy fanaparitahana antontan-taratasy ara-potoana; manohana ny hetsika eny an-toerana; manomana sy manome fanampiana ny sekretera ankapobeny, sns.
Araka ny takiana, izy koa dia hanome fanampiana ho an'ny famatsiam-bola sy ny fanohanana ny tetibola sy ny fitantanam-bola ho an'ilay tetikasa.
Hiasa eo ambany fanaraha-mason'ny tompon'andraikitra voatendry manokana sy ny fitarihan'ny Mpandrindra ny Tetikasa ary ny fitarihana ankapobeny an'ny UNODC Representative and Head of Program.
Ny haavon'ny paositra dia SB3 / 2 (mitovy amin'ny G5).
Ireto tompon'andraikitra ireto dia hanao ireto asa manaraka ireto:
Omeo ny fanohanana amin'ny asa, fandaminana, logistika ary fitantanana ny tetikasa;
Miaraha miasa amin'ny mpandrindra ny tetik'asa, ny tompon'andraikitra amin'ny tetikasa hafa ary ny mpanampy ny Programan'ny mpitarika mba hahazoana antoka fa omena ny fanohanana ara-pitantanana sy ny fandaminana ilaina amin'ny hetsika isan-karazany, matetika miaraka.
Ampio ireo mpanara-maso sy tompon'andraikitra hafa voatendry hanatanteraka ny andraikiny amin'ny tetikasa amin'ny alàlan'ny fanatanterahana asa isan-karazany.
Ny maha-izy azy ary manatanteraka fandaminana ilaina, lojikajika ary fitantanan-draharaha ilaina ho an'ny vondron'asa misy ny tetikasa, toy ny seminera, atrikasa ary fivoriana.
Ilaina izany: ny famaritana ny fepetra takiana amin'ny serivisy sy ny fandaminana ny fividianana azy ireo, ny fandaminana ny dia sy ny fampiantranoana ny mpiasa, ny manam-pahaizana ary ny mpandray anjara amin'ny tetikasa; fanomanana sy fanaparitahana antontan-taratasy; manohana ny hetsika eny an-toerana sns.
Omeo fanampiana ny UNODC Security Focal Point momba ny fiarovana ny mpiasa ao amin'ny UNODC.
Manoro hevitra sy manao fandaharana amin'ny fandefasana sy ny fahazoana ny birao sy ny kojakoja momba ny tetikasa ary ny fitaovana sy ny vokatry ny ankohonana; anisan'izany ny fahazoan-dàlana.
Manomeza torohevitra ary ampio ireo mpiasa sy ny mpiaramiasa aminy amin'ny alàlan'ny fanodinana ny fangatahana visa, kara-panondro, fahazoan-dàlana mitondra fiara ary antontan-taratasy ilaina amin'ny mpiasa arakaraka ny fepetra takian'ny Firenena Mikambana sy ny firenena misy ny toerana anaovana adidy.
Manaova adidy hafa takiana, toy ny fifanoratana amin'ny ankapobeny, manatrika fivoriana ary manomana minitra fivoriana sns.
Manomeza fanampiana ho an'ny fividianana vola sy ny tetibola ary ny fitantanana ara-bola ho an'ny tetikasa: miara-miasa akaiky amin'ny Tetibola sy Mpanampy ara-bola ny tetikasa, manohana ny asa amin'ity faritra ity raha ilaina izany.
Miaraha miasa akaiky amin'ny Lead Program Associate ary manompoa mpanampy raha ilaina izany
Manomàna tombana amin'ny vidiny ary tazomy ny vinavina fandaniam-bola sy topimaso momba ny hetsiky ny tetikasa.
Manampy amin'ny fifandraisana ara-dalàna sy tsy ara-potoana ary ny fanarahana ny fifandraisana amin'ireo andrim-panjakana sy manampahefana, solontenan'ny fikambanana ONU hafa, ONG, fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena, olona loharanon-karena ary haino aman-jery mikasika ny baikon'ny UNODC sy ny raharaha momba ny tetikasa.
Tazomy ny fifandraisana sy ny fandrindrana matetika ao anatin'ny CONIG sy ny Sampana misoroka ny asa fampihorohoroana ary ny faritra isam-paritra ho an'i Afrika sy ny Afovoany Atsinanana; mifandray amin'i PNUD sy fikambanana hafa mifandraika amin'ny Firenena Mikambana momba ny raharaham-pitantanana mifandraika amin'ny fanatanterahana tetikasa.
Manangona, manangona ary mitahiry rakitra amin'ny fampahalalana mifandraika amin'ny hetsiky ny tetik'asa, mamokatra fidirana ho an'ny tatitra momba ny tetikasa sy ny tambajotram-baovao mifandraika ary mitazona ny lisitr'ireo andrimpanjakana sy manampahaizana; mitazona firaketana an-tsipiriany momba ny hetsiky ny tetikasa, ao anatin'izany ny fandaharam-potoana, ny lisitry ny mpandray anjara, ny antsipirian'ny fifandraisana ataon'ny manam-pahaizana ary ny tatitra nataony.
Manampy amin'ny fitantanana, fanaraha-maso, fandraketana ary fanariana fananana araka ny tokony ho izy, amin'ny fanomanana ny tatitra momba ny fahazoana sy ny fanaraha-maso (R&I) ho an'ny fandefasana amin'ireo sampana mpividy ilaina sy asa fitoriana.
Manampy sy manomana programa sy lozisialy ho an'ireo mpitsidika mitsidika, iraka, delegasiona ary solontena mpamatsy vola.
Manatanteraka asa hafa araka ny nanendrena anao.
Manam-pahaizana amin'ny fitantanan-draharaha sy ny fandaminana ny tetikasa ahitana ny fahalalana sy ny fahalalana tsara momba ny hevitra sy ny fomba fiasa mifandraika amin'ny fitantanana teti-bola sy ara-bola; fahalalana ny fitsipika ara-bola sy ny lalàna mifehy ny Firenena Mikambana ary koa ny fahafantarana ny politikam-panjakana UN sy ny fomba fiasa mifandraika amin'ny teti-bola fandaharana sy ny fitantanana ara-bola; naneho ny fahaiza-manao matihanina sy ny fifehezana ny fizotran'ny fitantanan-draharaha; fahafaha-manao asa isan-karazany amin'ny fitantanan-draharaha, ao anatin'izany ny fandaminana ny hetsika sy ny fandaminana ary ny fitantanana ny harena maha-olona; fahaizana mametraka an-tsoroka ireo loza mety hitranga sy manao fifanenjehana, araka ny takiana.
Mampiseho ny reharehan'ny asa sy ny zava-bita; dia mitandrina sy mahomby amin'ny fanatanterahana ny fanoloran-tena, ny fanarahana ny fe-potoana ary ny fanatrarana vokatra; atosiky ny matihanina fa tsy ny fanahiana manokana; mampiseho fikirizana rehefa miatrika olana na fanamby sarotra; ary fanoloran-tena aseho amin'ny soatoavin'ny Firenena Mikambana, indrindra ny tsy fivadihana amin'ireo hetsika sy fitondran-tena isan'andro.
Inona no andraisanao amin'ny Apply Now For UNDP Job any Abuja ho an'ny Program Assistant 2021? Mamporisika anao aho hampiasa an'io fahafahana hizara ity fampahalalana ity amin'ny hafa mampiasa ny Facebook, Twitter, or Google+. zarao bokotra eto ambany.
Ampidiro izao ho an'ny asa consultancy ao amin'ny UNDP, Abuja - 2016
Portal momba ny asa momba ny asa ho an'ny ankizy United Nations 2021 www.unicef.org
Portal momba ny fandraisana mpiasa ho an'ny fampandrosoana ny Firenena Mikambana 2021 www.undp.org
Fampiharana momba ny fandaharan'asan'ny Firenena Mikambana momba ny fampandrosoana 2021/2022
UNICEF Asa ho an'ny mpanampy amin'ny fitantanana 2021 Ampiharo izao
Unicef ​​asa ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana 2021 Ampiharo an-tserasera izao
Fandraisana mpiasa UNICEF ho an'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana any Abuja, Nizeria 2021
Tags: Abuja Jobs, Ampidiro izao Ho an'ny asa UNDP, Ampidiro izao Ho an'ny UNDP Job 2021, Ampidiro izao Ho an'ny asa UNDP any Abuja, Ampidiro izao Ho an'ny asa UNDP ao Abuja 2021, Ampidiro izao Ho an'ny UNDP Job any Abuja ho an'ny mpanampy fandaharana, Ampidiro izao Ho an'ny UNDP Job any Abuja ho an'ny Program Assistant 2021, Ampiharo izao amin'ny asa UNDP, Ampiharo izao ho an'ny asa UNDP 2021, PNUD
« BLW Staff Portal www.blwstaffportal.org/auth/login/?refr=Lw== Vaovao farany
Fidinan'ny Kandidà voafidy fenix International 2021/2022 PDF List »